Varimi Vavaki Vanosiya Soko Rekutengesa? | Ehupfumi Zvemari
Iko kutya kuti pangave nekudonha mumisika yepasi rose yemasheya kuri kukonzera chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati kutora chenjedzo yakawanda kuvhura zvinzvimbo mumisika. misika yemari. Asi kusvika papi pane kutapurirana kubva kune imwe nzira yemari yekudyara kuenda kune imwe? Mupfungwa iyi, iyo data haina kujekesa mamiriro matsva anoratidzwa sezvino. Kunyangwe paine zvimwe zviratidzo zvekuti zvinangwa zvevanhu vanoda kuita yavo kana yemhuri midziyo inogona kubatsira inogona kuenda.
Mukati meichi chiitiko chakajairika, musika wekuSpain wemusika wakatengesa huwandu hwemamiriyoni makumi mana nemakumi mashanu nemakumi mashanu emamiriyoni ema euro mumwedzi wekupedzisira wegore rapfuura, unomiririra 40.955% pasi pemwedzi mumwe chete wegore rapfuura. Kune rimwe divi, huwandu hwekutaurirana munaNovember hwaive 11,1 mamirioni, ndiko kuti, 3,7% kuderera pane Zvita 13. Idzi data idzi dzatove dzichipa kumwe kunongedzera kuti kupi kupfura kuri kuenda mumusika wemari. Kunyangwe a kumwe kudzikira mune zvinzvimbo vatengesi vevatengesi, avo vari kunyatso tarisa kune mamwe mafesi emari, mune dzimwe nguva kunyangwe kubva kune mamwe mamodheru.
Kune rimwe divi, iyo misika yezvigadzirwa zvemari yakawedzera kutengeserana mune ramangwana pane yakasarudzika indekisi yemari yenyika, iyo Ibex 35, mune yakaunganidzwa pagore 2%. Zvichiri mukupesana, zvibvumirano zvenguva yemberi pamadiviti emasheya zvakawedzera kutengeserana ne77,8% uye zvibvumirano zvenguva yemberi pane indekisi yeSpanish stock market dividend impact ne58,9%. Mune ramangwana remasheya munaNovember, kutengesa kwakawedzera ne146,5% zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rapfuura. Nzvimbo yakavhurika inowedzera zvine chekuita nemwedzi wapfuura mune ramangwana pane zvikamu uye mune zvingasarudzwa pamasheya ne4,4% uye 6,6%, zvichiteerana, uye mune sarudzo paIbex 35 ne6.1%.
1 Vashandi mune zvigaro zvekuwana mari
2 Mhedzisiro yeBME yakapihwa
3 Mutsara wakasimba kwazvo webhizinesi
4 Kutsaudzira kune zvimwe zvigadzirwa zvemari
5 Kudzoka kune kushomeka
Vashandi mune zvigaro zvekuwana mari
Nezvemari yakamisikidzwa, huwandu hwakatengeswa munaZvita hwakakura ne36,2% zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura, nekuda kwekubvumirana kwezvinhu kubva chikwereti chenyika nevekunze. Iko kuwedzera kunoenderana nemwedzi gumi nembiri yegore yaive 45,5%. Kune rimwe divi, huwandu hwenyaya nyowani dzakabatanidzwa dzekutengesa muMARF dzakasvika 520 mamirioni euros, izvo zvinomiririra kuwedzera kwe61,5% zvichienzaniswa nemwedzi mumwechetewo wegore rapfuura.
Zvakare zvakakosha zvikuru inyaya yekuti huwandu hwakaunganidzwa pakupera kwemwedzi gumi nembiri yegore yaive 5.688 mamirioni euros, inomiririra kuwedzera kwe51,1%. Izvi zvinoreva kuti iro rakasarudzika vhoriyamu iri kutenderera mumusika wezvemari uyu rasvika mamirioni 3.411 emamiriyoni. Chiverengero chinomiririra kuwedzera kwakakosha kunofungidzirwa kusiri pasi uye kusapfuura 36,6%. Mukukura kwakwezva kutarisisa kwakawanda kune chikamu chakanaka chevamiriri vezvemari venyika ino uye icho zvakare chinotora kukosha kwakakosha pane izvo zvinogona kuve sarudzo yevatengesi vadiki nepakati kubva zvino zvichienda mberi.
Mhedzisiro yeBME yakapihwa
Kune rimwe divi, iyo kambani yakanyorwa pamusika weSpanish wemusika uyo unobatana zvakananga nekuita kwevashandi ndeye BME. Eya, iyi kambani yakaunza kumusika chirongwa chayo chakarongeka chemakore matatu anotevera pazuva rayo rekutanga rekudyara nechinangwa chekusiyanisa mari yainowana, kukurumidzisa kukura nekuchengetedza iyo mugovani purofiti. Uye zvechokwadi yakasiya imwe dhata iyo inogona kuve yakakosha kwazvo pasarudzo dzevashambadzi vadiki nepakati.
Mupfungwa iyi, nhanho nyowani yekukura inotsigirwa neyakaomeswa manejimendi modhi, iko kusimudzira munzvimbo dzayo dzebhizinesi uye kukura kusingawanzo ndeimwe yemhedziso huru iyo yasiya mumusangano uyu nevatori venhau. Sezvo mbiru dzechirongwa chitsva dziri kusiyanisa uye kutarisa kwevatengi. Kune rimwe divi, yakagadza kuti ichawedzera kuzvipira kwayo kuti ipe purofiti yakakwira uye nemutemo wakadzikama wemugovano kune vagovana.
Mutsara wakasimba kwazvo webhizinesi
Imwe yeakasimba mapoinzi echirevo chayo ndiyo inoratidza kuti inoshuvira kuve mupi wezvigadziriso zvemisika yeSpain yemasangano emari muketani yekoshi. Kusvika padanho iro Javier Hernani, CEO weBME, akajekesa mumharidzo yake masimba ayo kambani inofanirwa kutarisana nehurongwa hwehurongwa, rinozove iro nyowani nyowani nzira yekambani panguva yezvidzidzo zvitatu zvinotevera.
Pane imwe chinyorwa, mumiriri weBME akasimbisa kuti iri yakasimba bhizinesi modhi uye inobatsira, hukama hwepedyo uye hwenguva refu hwainochengetedza nevatengi vayo, kugona kwayo kwetekinoroji, tarenda remapoka ebasa rayo uye simba uye kuzivikanwa kwechiratidzo chayo. "BME inoda kuzove mupepeti wezvivakwa mumisika yeSpain yemasangano emari muketani yese." Kuti uite izvi, ichawedzera chiitiko chenzvimbo dzayo dzebhizinesi uye nekufunda inorganic kukura mikana iyo inobvumidza iyo kusiyanisa uye kupa yakanakisa sevhisi kune vatengi vayo.
Kutsaudzira kune zvimwe zvigadzirwa zvemari
Chero zvazvingaitika, ichokwadi kuti chimwe chikamu chevashambadziri vadiki nepakati vakasarudza kudzokera kumari yakagadziriswa zvakare mushure mechiitiko chitsva icho misika yemari yakasiyana iripo parizvino. Uye iwe haugone kukanganwa nezve simuka muhuwandu hwechimbadzo yemari yakatarwa-nguva kubhengi. Nekuti zvirizvo, chikamu chakanaka cheguta guru remari yekudyara chiri kuendeswa kunzvimbo dzinobatsira kwazvo dzinotengeswa nemabhangi.
Semhedzisiro yeiyi bhizinesi zano, purofiti inogona kuwanikwa iyo inowanzo kuve mitsara pakati pe1% ne2% kuburikidza nemubhadharo wakagadziriswa uye wakavimbiswa gore rega rega. Kunyangwe paine kusagadzikana kwekuti mari ichafanirwa kuoma mitezo kwenguva yakati rebei kana shoma. Asi nenzira iyi, mhirizhonga dzinogona kuitika mumisika yemari dzinodzivirirwa uye izvo zvinogona kubuda mukati megore rakaomarara ratichangotanga. Iyi imwe nzira inoitirwa vashambadzi vadiki nepakati nepakati vane mbiri yekudzivirira kuti vaite mabasa avo ekudyara.
Kudzoka kune kushomeka
Mumwe mhedzisiro yeizvi kusagadzikana mumisika yemari Iyo inotorwa nekushaikwa kwekukwezva mukudyara. Kwete chete muzvigadzirwa zvemari, asiwo yakagadziriswa mari iri kupa kudzoka kwakashata, kunyangwe zvakanyanya. Hatigone kukanganwa kuti 2018 yakaona rimwe remakore akaomesesa ekudyara uye kuti rakakonzera chikamu chakanaka chevatengesi kuti vasiye mari yekudyara kuburikidza nekudzikunura kwavo.
Chinangwa chikuru chezviito izvi hachisi chekutsvakisisa kuenda mu kurasikirwa nemari izvo zvakagadzirwa mumwedzi iyi. Kwenguva yekutanga mumakore mazhinji, sezvo ivo vakapihwa basa rekuzivisa kushamwaridzana kwevamwe vanoita mari. Iko kunotsvagwa pamusoro pevamwe kutarisisa kuri kushomeka munhoroondo dzazvino. Kubva pane ino mamiriro ese, hazvigone kutaurwa kuti ino inguva yakanaka yekuita kuti mari ichengetwe. Kwete zvakati wandei uye zvinoenderana nemaitiro ari kumisikidza mazhinji emisika yemari.
Chero zvazvingaitika, zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa nguva dzese kuti kunyangwe mune yakaipisisa mamiriro ezvinhu, pachave paine mikana chaiyo yekuita bhizinesi mubazi rekudyara. Chikamu chakaomesesa chekushandisa zano iri chakavakirwa pakutsvaga idzi niches dzemusika sezvo ino sisitimu yakaoma kwazvo panguva ino chaiyo uye mune ino mamiriro ezvehupfumi atiri kupfuura nawo. Kupi chete vatengesi vane ruzivo rwakawanda ivo vari muchinzvimbo chekuwana zviwanikwa zvemari zvine hukuru hwekukura. Kazhinji kubva kumamwe misika, senge mbishi zvigadzirwa kana simbi yakakosha.
Chero zvazvingaitika, zvinogara zvakagamuchirwa kuve nemari muaccount yazvino kupihwa mikana inogona kubuda mumisika yemari. Hazvishamisi kuti ivo vanogona kuoneka panguva yausingatarisiri uye mune ino mamiriro hapazove nesarudzo kunze kwekuve neiyo mari yakakwana yemari muaccount yekuchengetera mari kubhangi. Sevamwe vevanoongorora zvemari vane mukurumbira mumusika wemari vanga vachikurudzira.
Mukupedzisa, pane chinhu chimwe chete chechokwadi uye ichocho hapana chimwe kunze kweimwe gore zvichave zvakaoma kwazvo kuita kuti kuchengetedza kubatsire sezvaunoda kubva pakutanga. Asi pane zvinopesana uchafanirwa kunyatsoteerera kune zvese zvinoitika kubva zvino zvichienda mberi. Zvese zviri zviviri maererano neyakaenzana uye mari yakatarwa uye kunyangwe kubva kune mamwe mamodheru emhando dzese. Chikamu chakaomesesa chekushandisa zano iri chakavakirwa pakuona idzi niches dzemusika sezvo ino sisitimu yakaoma kwazvo panguva ino chaiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Varimi Vavaki Vanosiya Soko Rekutengesa?
Diki duramazwi rekudyara mumusika wemasheya